🥇 ▷ Waxa laga fisho Samsung Unpacked 2020: Galaxy S20, Buds +, Z Flip, inbadan ✅
Waxa laga fisho Samsung Unpacked 2020: Galaxy S20, Buds +, Z Flip, inbadan
Waxaan usbuuc kaliya uga harsan nahay munaasabadda soo socota ee weyn ee Samsung, oo aan La Soo Bandhigin 2020. Stephen Hall iyo anigu waxaan joogi doonnaa xafladda San Francisco halkaasoo Samsung ay ka bilaabi doonto calanka soo socda, isku laabma iyo wax intaa ka sii badan. Tani waa waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato Khilaafka.
Marka hore khariidada waa taxanaha Samsung Galaxy S20. Qadka taleefanka casriga ah ee shirkada casriga ah ee shirkada sameysay ayaa dib u soo laabatay waxaana sidoo kale ay la kulmeysaa koror xagga sumadeynta ah. Sannadkii hore waxaan helnay taxanaha Galaxy S10, laakiin Samsung ayaa ka faa’ideysaneysa tobanka sano ee cusub iyagoo leh qorshe magac cusub.
In kasta oo tirooyinka waaweyn ay yihiin lambarro, weli Galaxy S20 ma noqon doonto mid aad u weyn marka loo eego qaabeynta. Sida taxanaha ‘S10’, ‘S20’ wuxuu ku lahaan doonaa shaashad hore oo balaadhan oo aan ka yaraynaynin dhinaca hore kaasoo leh godad ay ku fadhiistaan ​​kamarada hore. Xaqiiqdii, markan shaashadu waxay dhexsaari doontaa shaashadda baddalkeeda dhanka midig. Waxaa sidoo kale jira shaashadda qalabka sawirka faraha ultrasonic.
Samsung ayaa sidoo kale beddeshay naqshadda dhinaca dambe ee ‘Galaxy S20’ si loogu habeeyo kaamirooyin badan. Waxaa jira cutub u eg kanoor gadaasha aaladda oo ka kooban afar dareemeyaal kamarad ah.
Xirmooyinka 2020 ayaa sidoo kale leh seddex moodel Samsung Galaxy S20 – S20, S20 + iyo taxanaha S20 Ultra. Dhammaan noocyada kaladuwan ee taxanaha ‘S20’ waxaa la filayaa inay bixiyaan bandhig QHD + AMOLED oo leh cabbir 120Hz ah iyo processor Snapdragon 865 ah.
Iyada oo la adeegsanayo S20 iyo S20 +, kaydinta ayaa la rajaynayaa in ay ka bilaabato 128GB oo ay ku jirto kaadhka microSD, laakiin waxa la yaab leh in aan la xusin heerarka kale ee kaydinta. Labada taleefanba waxay sidoo kale bixin doonaan kaamiro weyn oo 12MP ah, kamarad aad u ballaaran, iyo muraayad 64MP ah oo muraayad telephoto ah oo leh iftiinka indhaha ee 3x. S20 waxay soo celineysaa shaashadda 6.2-inji halka S20 + ay horay ugu socoto 6.7-inji
Dhanka S20 Ultra, waxaan aragnaa daanyeer gaar ah. Giant 6.9 inch wuxuu ku duuban yahay bir aan nadiif ahayn, wuxuu hayaa ilaa 512 GB iyo sidoo kale RAM oo gaaraya 16 GB. Waxa kale oo jira 108MP kamarad weyn, 12MP saacad-duuliyaha waqtiga-duulimaadka-weyn ah, iyo 10x kale oo kamarad ah zoom indhaha ah. Samsung xitaa waxay isticmaashaa softiweerka dhijitaalka ee 100x.
Waxa muhiimka ah, wax ka mid ah dhammaan taleefannadan gacanta Caadi leeyihiin waa jaakada taleefanka gacanta. Mid ku shub 3.5mm, sababtoo ah haddii Samsung ay ku dhammaato intaas, way dhiman lahayd.
Waa imisa qiimahan oo dhan? Hal sheegasho oo xanta ah in Galaxy S20 uu ka bilaaban doono $ 999 Mareykanka oo ay ku jiraan S20 + iyo S20 Ultra $ 1.99 iyo $ 1,399. Iyadoo wararka xanta ah wali aysan ku filneyn Mareykanka. USA, Taleefanka gacantu ma noqon doono qof jaban. Muraayadaha hore ayaa muujiyay in qiimaha caalamiga ahi sidoo kale aad u sarreeyaan.
(kuxiran) https://www.youtube.com/watch?v=m0OHQsbR2vM (/ embed)
Daboolida ugu cusub ee Galaxy S20:
Ka baxsan Galaxy taxanaha S20, Samsung ayaa sidoo kale ku baxday laban laab kale. Miyuusan ku filneyn Galaxy Fold 2Samsung Galaxy Z Flip wuxuu joogi doonaa Unpacked 2020 sida taleefanka qaab-isku-dhejiska ah ee nooca isku-midka ah ee Motorola Razr.
In ka badan Galaxy Z Flip wuxuu laalaabay geeska toosan oo leh 6.7 inji gudaha ah Muuqaalka isku-laaban ee isku-laaban waa FHD + saamigana waa 22: 9 Sare. Si looga fogaado waxyeelada loo yaqaan ‘Galaxy Fold’ ee sidaa u nugul, Z Flip wuxuu isticmaalaa galaas aad u dhuuban. Waxa kale oo jira muuqaal dibedda ah oo lagu cabbiray 1 inji, oo weyn oo ku filan in lagu muujiyo ogeysiinta iyo waqtiga. Qalabkani wuxuu sidoo kale isticmaalaa Snapdragon 855+, 8GB oo RAM ah, sidoo kale wuxuu leeyahay baytar 3,300 mAh sidoo kale.
Z Flip wuxuu kaloo ku yimaadaa laba midab, madow iyo guduud, wuxuuna kuyaalaa laba kamaradood 12MP dhinaca dibada ah. Waa imisa Sida muuqata, qiyaastii $ 1,500. Dhanka togan, Z Flip waxaa la rajeynayaa in laga heli karo dhammaan shirkadaha xamuulka Mareykanka ah. USA
(kuxiran) https://www.youtube.com/watch?v=RN6ZM4SGNQk (/ embed)
Galaxy-ka ugu cusub ayaa sheekada soo rogaya:
Samsung Galaxy Shoot +
Dhinaca Galaxy 10 sano ka hor, Samsung ayaa ku dooday maqalka toogashada ee Galaxy Headphone. Taleefoonnada gacanta ee wireless-ka ayaa cadeeyay inay runtii ku guuleysteen adeegsadayaasha Samsung oo hadda, sanadka 2020, shirkadda waxay diyaarineysaa Galaxy Shoot +. Taleefoonnada casriyeysan ee la cusbooneysiiyay ma ahan kuwo si buuxda ula wareegaan si kasta oo ay yihiin, laakiin waxay bixiyaan waxqabadka maqalka oo ka sii wanaagsan, makarafoon la hagaajiyay, iyo sidoo kale nolosha baatariga si aad u dheer.
Qeexitaanno dhammaystiran marka la barbar dhigo Galaxy asalka ah Cudur dillaacay ayaa hadda soo booday oo waxaad arki kartaa isbarbardhig buuxa oo ku yaal shaashadda hoose.
Sheekada ugu dambeysay ee Samsung Galaxy Bud +:
Guriga Galaxy Mini?
Ka dib waxa u eg da’da, waxay umuuqataa Samsung Ugu dambeyntii xidho bixby Galaxy Domestic hadlaya suuqa. In kasta oo asalkiisu ka weyn yahay Galaxy Guri weli lama helin, isagoo sii yaraanaya. Galaxy Home Mini ugu dambeyntii way imaan kartaa.
Horraantii sanadkan, Samsung waxay xaqiijisay in Home Mini uu ku dhufan doono “horraantii 2020.” Kadib boosta laga tirtiray wakiilka Samsung ayaa sheegay in qalabku sii socon doono bisha Febraayo 12 Boostada labaad waxay sidoo kale xuseysaa taariikhda 7-da Febraayo ay u tahay Korea, sidaas darteed waxaa hubaal ah in Galaxy Home Mini uu arki doono olole ballaaran oo ka socda Samsung Unpacked 2020.
Waxbaa kajira Google?
Farriin twitter ah oo ka socota koonto Google oo ku taal Twitter Waxa kale oo ay dhalisay wararka Samsung. wax Aniga oo leh Google Shaqsi ahaan, waxaan u malaynayaa in tweet-gaani kaliya uu dejinayo imaatinka S20 dadkuna ay wax badan ka akhriyaan arrintaas, laakiin yaa garanaya, laga yaabee in labada shirkadood ay ku madadaalin doonaan dukaanka.
Wax xiiso leh uun geeska agtiisa. Waxaan kugu aragnaa adiga oo aan xirnayn, @ SamsungMobile: https://t.co/FU3iJCnf77 pic.twitter.com/M9pGlfRQ26
– Android (@Android) Febraayo 6, 2020
Hal fikir oo aan helnay wuxuu ahaa wadaagida ugu dhow Google. Waxaan markii ugu horreysay ogaannay muuqaalkii xagaagii hore, laakiin wali si rasmi ah ugama aannu gaarin hadda. Dhawaan, waxaa shaaca laga qaaday in Samsung ay sidoo kale ka shaqeynayso astaamo wadaag wadaag la mid ah. Waxaa laga yaabaa in aaladaha Samsung ay la jaan qaadaan Google? Si kastaba ha noqotee, waxyaabo yaab leh ayaa dhaca.
Daawashada xariifka ah?
Tani waa suuragal aad u fog. Suuqa Samsung smartwatch cusub oo onkod ah ayaa ku jira shaqooyinka. Ilaa hada, way jireen wax badan Caddayn yar oo arrintaas ku saabsan. Marka inta ay jirto suurtagalnimada saacad cusub, aad umana farxo.
Inbadan oo kusaabsan Samsung:
FTC: Waxaan isticmaalnaa isku xirnaan xubin dakhli toos ah. Dheeri ah.
Ka eeg Google 9to5 gudaha YouTube si aad uga hesho warar dheeraad ah:
(kuxiran) https://www.youtube.com/watch?v=TteULKbNr50 (/ embed)